Zimbabwe gem sale stirs 'blood diamond' fears | UTSanDiego.comJune 2, 2015Today's PaperWeather 62º FTrafficSurfWebcamsSubscribe/LoginNewsLocal TopicsCommunitiesNorth CountyNationWorldWatchdogObituariesDroughtClose ␡NewsWater-saving mandate kicks inBusinessBiotechEconomyEnergyFinanceReal Estate & GrowthRetailTechnologyTourismClose␡BusinessCompany folds holding cherished photosVideoNewsSportsBusinessEntertainmentFeaturesWatchdogMilitaryMoreClose ␡MilitaryWomen in CombatSpecial report:San Diego’s fleetU-T in AfghanistanWWIIClose ␡MilitaryVinson crew rescues elderly boaterDeals & OffersDaily DealsContestsNewspaper AdsEventsGuidesSD Best PollStoreClose ␡U-T OffersThree Truewhite on-the-go'sReal EstateHomes for SaleNew HomesRentalsOpen HomesU-T Certified ServicesMortgagesCommunitiesOpen House ShowClose ␡RealEstateJim Carmichael joins Keller Williams El Cajon officeSportsChargers / NFLPadres / MLBAztecsTorerosChargers StadiumSoccerHigh School / PrepsHorse RacingClose ␡sportsPadres shut down by Mets' deGromEntertainmentEventsDiscoverSDDining & DrinkingMusicLifestylePerforming ArtsArts & CultureThings To DoClose ␡EntertainmentReview: Strong cast lifts 'A New Brain'MarketConnectHealthLifestyleHome ImprovementReal EstateEntertainmentBusinessEnergyTechnologyClose ␡MarketConnectHelping your garden grow: Choosing a palm treeOpinionEditorialsCommentaryLetters to the EditorSteve BreenSteve Breen Caption ContestClose ␡OpinionState Senate has DUI nannies? Really?ClassifiedsJobsMerchandiseLegalPetsPlace an AdObituariesClose ␡CarsSell Your CarBuy a CarResearch CarsFinanceFind a DealerClose ␡⌂NewsZimbabwe gem sale stirs 'blood diamond' fearsBy MICHELLE FAUL, Associated Press Writer3:18 p.m.Aug. 11, 2010⎙ Print Comments
/ APReddit✉-CommentsDavid Kassel, chairman of the New Reclamation Group and Abbey Chikane of Kimberley Process give the thumbs up, following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
David Kassel, chairman of the New Reclamation Group and Abbey Chikane of Kimberley Process give the thumbs up, following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APAbbey Chikane of Kimberley Process shows the certificate awarded to Zimbabwe following their granting of a Kimberley Process certification in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
Abbey Chikane of Kimberley Process shows the certificate awarded to Zimbabwe following their granting of a Kimberley Process certification in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APDiamond buyers and investors chat following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
Diamond buyers and investors chat following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APAbbey Chikane of Kimberley Process, right, chats to diamond buyers and investors following the granting of a Kimberly Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
Abbey Chikane of Kimberley Process, right, chats to diamond buyers and investors following the granting of a Kimberly Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APA traditional dancer performs following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
A traditional dancer performs following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APAbbey Chikane of Kimberley Process delivers a speech following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
Abbey Chikane of Kimberley Process delivers a speech following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APZimbabwean Prime Minster Morgan Tsvangirai, center, chats to Mines and Minerals Minister, Orbert Mpofu, left and Zanu PF Chairman, Simon Khaya Moyo, right, following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
Zimbabwean Prime Minster Morgan Tsvangirai, center, chats to Mines and Minerals Minister, Orbert Mpofu, left and Zanu PF Chairman, Simon Khaya Moyo, right, following the granting of a Kimberley Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APZimbabwean Prime Minster Morgan Tsvangirai delivers a speech following the granting of a Kimberly Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)— APShare PhotoReddit✉
Zimbabwean Prime Minster Morgan Tsvangirai delivers a speech following the granting of a Kimberly Process certificate to Zimbabwe in Harare, Wednesday, Aug. 11, 2010. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
/ APFILE - This is a Wednesday, Nov. 1, 2006 file photo of miners as they dig for diamonds in Marange, eastern Zimbabwe, Wednesday, Nov. 1, 2006. Zimbabwe began selling millions of carats of rough diamonds Wednesday Aug. 11, 2010, that were mined from an area where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and forced children into hard labor. Abbey Chikane, Zimbabwe monitor of the world diamond control body, certified the diamonds ready for sale on Wednesday, having said controversy-plagued diamonds from eastern Zimbabwe met minimum international standards. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi-File)— APShare PhotoReddit✉
/ APJOHANNESBURG  Zimbabwe auctioned 900,000 carats of rough gems Wednesday from a diamond field where human rights groups say soldiers killed 200 people, raped women and enslaved children.